ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) January 5, 2012 at 1:54 AM
အမေ့မွေးနေ့မှသည် နှစ်ပေါင်း များစွာ မိသားစုနဲ့အတူတူ ကျန်းမာချမ်းသာစွာ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာကို ကွက်တိကြီး မွေးဖွားလာပါရောလား။ ဒါကြောင့်မို့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကလေး ၁၂ ယောက်တိတိ မွေးပေးနိုင်ခဲ့တာ ထင်ပါရဲ့။
မံစိလဲ အမေ့ခြေရာ နင်းမဲ့ပုံဘဲ။ ဘာဖြစ်ဖြစ် အားပေးရမှာဘဲ။းဝ)
jasmine(တောင်ကြီး) January 5, 2012 at 3:36 AM
PURPLE VINE January 5, 2012 at 3:42 AM
လိမ္မာလိုက်တဲ့ သမီးစံလေး။ ညီမမေမေ သားသမီးမြေးမြစ်များနဲ့အတူ အသက်ရှည် အနာကင်းစွာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေနိုင်ပါစေ။ အဒေါ်ကို ကန်တော့နေတဲ့ပုံလေးကို အရမ်းသဘောကျတာပဲ။
ကိုရင် January 5, 2012 at 6:35 AM
အင်း.. ရှင်မွေးလွန်းရဲ့ မျိုးဆက်သစ်ကလေးက မိခင်ကြီးကို လုပ်ပေးတဲ့ မွေနေ့ပွဲပေါ့..သက်ရှည် ကျန်းမာပါစေဗျာ..နောက်ထပ် မြေးတစ်ရာ မြစ်ဆယ်ကျိပ် လောက်ထိ ရှင်သန် နေနိုင်ပါစေ..
Thandar Lwin January 5, 2012 at 7:08 AM
အိုး မောင် နှမ ၁၁ ယောက် နဲ့ သမီးစံ ဘ၀ လေးပျော် စရာကောင်းလိုက်တာ ။
သမီး စံ လေး ရဲ့ မေမေ နောင် နှစ်ပေါင်း များစွာ ကျန်းမာစွာ ပူပင်ကြောင့်ကြ သောက ကင်းစွာ ဖြင့် မမေ့ မလျော့ သတိလေး ကပ်ပြီး ၀ိပဿနာ ကို အားထုတ်နိုင်ပါစေ ။
မဒမ်ကိုး January 5, 2012 at 8:25 AM
တညင်သူ ရှင်မွေးလွန်း သမီးစံရဲ့မေမေ အသက်ရာကျော်ရှည်ပါစေ .
သားသမီးတွေနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စွာနေရပါစေ .
သမန်စီးလေးကလဲ ဒီနှစ်ကိုဘွဲ့ဝတ်စုံဝတ်ရအောင်ကြိူးစားပေးလိုက်နော် .
သမီးအမေရဲ့ မွေးနေ့ပွဲလာတက်ပါတယ် သမီးရေ....
Candy January 5, 2012 at 9:03 AM
မမသမီးစံအမေက လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ မွေးတာပေါ့နော်.. မွေးနေ့ပွဲကြည့်ရတာ ပျော်စရာကြီး.. ကန်ဒီတောင် အမေ့ကိုလွမ်းလာပြီ :(
လမင်းငယ် January 5, 2012 at 9:22 AM
ခဲ့ပါတယ် ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာမိသားစုနဲ့ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေနော်
ပျော်စရာကြီးပါလား ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် စာရေးတတ်တဲ့ ညီမ ငယ် တယောက် ညီမ မေမေ ကို မွေးနေ့ တရာ ကျော်အောင် ပြုစုကျွေးမွေးနိုင်ပါစေဗျာ
မိုးခါး January 5, 2012 at 10:47 AM
သမီးစံ မေမေ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာစွာနဲ့ သာသနာ အကျိုးအသက်ထက်ဆုံး သယ်ပိုးထမ်းရွက်နိုင်ပါစေး)) ဟက်ပီးဘတ်ဒေးပါ အန်တီ .. အဖွားလည်း အသက်ရှည်တယ်နော် .. ကောင်းလိုက်တာ ..
စကားမစပ် (ဗိုက်လည်းဆာသွားတယ် .. :D)
khin January 5, 2012 at 10:58 AM
မိဘကျေးဇူးသိတတ်တဲ. ညီမလေးဖြစ်ပါစေလို.။ ညလေးရဲ.မိခင်လည်း သက်ဆုံးတိုင် စိတ်ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ. ပြည်.စုံပါစေလို.ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကွယ်
chocolatecupidlay January 5, 2012 at 2:06 PM
အမေ သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပြီး မြေးတစ်ရာ သားမက်10 နဲ့ ကပ်ကျော်နိုင်ပါစေ..ဥုံ တစ်ဂိုးတစ်ဂိုး သရေ သရေ..အမေ့ခြေရာနင်းမဲ့ အပျိုကြီးစံ ဖြစ်ပါစေ..
ခင်မင်စွာဖြင့်..မောင်.......(စွယ်စုံကျမ်း) ..မေ့တော့မလို့ ..ငှဲငှဲငှဲ
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် January 5, 2012 at 4:24 PM
camomilla January 5, 2012 at 7:41 PM
blackroze January 5, 2012 at 11:34 PM
ဟုတ်တယ်မှတ်လား CIA ကဂျယ်ရီ ပစ်ပစ်ဘဲလေ..ဟဲဟဲ
ညီမလေးစံစံရဲ့ မေမေကို စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း
san htun January 6, 2012 at 5:06 AM
သမံစီးတို့အိုမား ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ချစ်တဲ့သူများနဲ့မွှေးနေ့ ပွဲပေါင်းများစွာကို ဆင်နွှဲနိုင်ပါစေ..
ကိုထွဋ် January 6, 2012 at 12:20 PM
သမီးစံ အမေ မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေ..
မြတ်ကြည် January 6, 2012 at 3:12 PM
သိတတ်လိုက်တဲ့ မိစံလေး၊ မိဘကို အမြန်ဆုံးကျေးဇူးဆပ်နိုင်ပါစေရှင်။ :)
ညီရဲ January 6, 2012 at 3:33 PM
သာဓုပါကွယ် သာဓုပါ... အမေ အပေါ်သိတတ်တဲ့ သမီးစံတစ်ယောက် ဘဝမှာ အောင်မြင်မှုတွေ ဆွတ်ခူးနိုင်ပါစေလို့ အစ်ကို ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်...
မြသွေးနီ January 6, 2012 at 4:17 PM
ညီမလေးမေမေ မွေးနေ့မှသည် ကျန်းမာချမ်းသာစွာ မွေးနေ့ရက်များစွာကို မိသားစုဝင်များနဲ့အတူ ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေ..။
ဟန်ကြည် January 6, 2012 at 6:41 PM
သမီးစံရဲ့ ပို့စ်ကိုဖတ်ပြီး အမေ့ကို လွမ်းလိုက်တာကွယ်...ကိုယ်ပြန်ပြီး ပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ အရွယ်မှာ အမေက မစားနိုင် မ၀တ်နိုင်တော့မှာကို အစိုးရိမ်ဆုံးပါပဲ...နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိ သမီးစံရဲ့အမေ့မွေးနေ့ကို သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းကျင်းပနိုင်ပါစေကြောင်း လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲနဲ့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရဲ့...
seesein January 6, 2012 at 7:05 PM
မုန့်ဖိုးများများပေးနိုင်ပါစေ လို့....မန်စိ တနှစ်က ကြာတယ်နော တလထက် တလ ပိုပိုပေးနိုင်ပါစေ အမေ...လို့ပြောရင် ပိုကောင်းမယ်။။။း)
မောင်နှမတွေ တတွေကြီးနဲ့ပျော်စရာကြီးပါလား မန်စိရေ...
မန်စိမေမေ သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပြီး မန်စိလုပ်စာတွေ တ၀ကြီးသုံးဆောင်နိုင်ပါစေ
ဘိုဖြူ January 6, 2012 at 10:52 PM
မွေးနေ့မှ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ သားသမီး မြေးများနဲ့
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! January 7, 2012 at 12:10 AM
ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ သမိးစံလေးပဲ..... :):) သမီးစံ မေမေနဲ့ အိန်ဂျယ်မေမေ အသက်အတူတူပဲ ..မောင်နှမတွေ များချက်က အိန်ဂျယ်နဲ့ သမီးစံ မိသားစုပေါင်းပြီး ဘောလုံးတစ်သင်း ထောင်လို့ရပြီ အားမငယ်နဲ့ နော်သိလား...:P:P:P
မွေးနေ့မှသည် ဘေးရန်ကင်းစွာ စိတ်ချမ်းသာဖြင့် သမိးစံမေမေ သက်တော် ရာကျော်ရှည်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးရင်း...
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) January 7, 2012 at 3:46 AM
မိဘကို အဲဒီလို သိတတ်တာ သိပ်တော်တာပေါ့ကွယ်
သမီးစံရဲ့ မေမေ အသက်ရာကျော်ရှည်ပြီး မွေးနေ့ပေါင်းများစွာကို သားသမီးမြေးမြစ်တွေနဲ့ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ
တရားထူးများလည်း ရရှိပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်နော်။.
mabaydar January 10, 2012 at 9:16 AM
သမီးစံတို့က မောင်နှမတွေအများကြီးပဲကိုး ပျော်စရာကြီးပေါ့... သမီးစံဖြစ်ချင်တဲ့ မိဘဖြစ်စေချင်တဲ့ သမီးမျိုးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်... သမီးစံမေမေလဲ ကျန်းကျန်းမာမာ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ သမီစံပြန်လည်လုပ်ကျွေးပြုစုတာကို ခံရပါစေ...